कस्तो हुनुपर्छ कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक प्रणाली ?
मुलुकमा इतिहासकै आवरणमा भए पनि बलियो कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने आर्थिक प्रणालीको कुनै पनि झिल्का देखिएको छैन । कम्युनिस्ट आर्थिक प्रणालीको त कुरा छोडौं पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त पनि प्रयोग गरिएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी, समाज र राज्यमा कस्तो आर्थिक दृष्टिकोण राख्छ र कसरी जीवन पद्धतिमा प्रयोग गर्छ ? भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्टहरु राज्यव्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवं जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि देशमा जनताका आधारभूत अधिकारहरु नै सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । देश नै स्वाधीन बनिसकेको छैन । त्यतिमात्र होइन जनताहरु गास र बासकै समस्याबाट पीडित छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । कार्लमार्क्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिस्ट विचारकहरुले सिद्धान्त र विचारका क्षेत्रमा जति सुन्दरता प्रदान गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा कठिन पारिरहेको छ । मार्क्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा लेख्नुभयो, ‘कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्ने हो निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नु हो गरिनेछ ।’ लेनिनले भन्नुभयो क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम उपलब्ध हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । माओले भन्नु भएको छ, ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाऊ ।’ यी महान् विचारकहरुका दृष्टिकोण र विचारहरु अत्यन्त उच्च र सुन्दर छन् । परन्तु यहाँनेर हालसम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रभावकारी र सफल हुन नसकेको पनि सँगै छ । लेनिन, स्टालिन र कम्युनिस्टहरुले खडा गरेको वैज्ञानिक समाजवाद टिक्न सकेनन् । त्यसको भित्री कारणमध्ये आर्थिक पनि रहेको छ ।
जनयुद्धदेखि पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म लोकप्रिय रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेताहरु सबैभन्दा विवादित र अनैतिक आर्थिक मामिलामै देखापरे । जनयुद्धको कठिन समयमा सर्वहाराकरण र कम्युनिस्टीकरण भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार माओवादी पङ्क्ति शान्तिवार्तापछि आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा भद्दा, कुरुप र पतीत देखाप-यो । मूल्यहीन प्रकारले पार्टीको पैसा लुकाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनताले कब्जा गरेको जमिन बेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउनेसम्मको हर्कत गरे । नेपाली जनताले सामान्यतः २००७ साल वरिपरिबाट विशेषतः २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सामन्ती एकात्मक र संसदीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा क्रान्ति गर्न लगातार जनसङ्घर्ष र जनयुद्ध सञ्चालन ग-यो । २०६३ सालयताको यात्रामा पनि राष्ट्रले स्वाधीनता र जनताले जनवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सकेनन् । बरु सत्ताको चरित्र सामन्ती निरङ्कुशताबाट दलाल पुँजीवादमा फेरियो । यस सत्ताको व्यवस्थालाई २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको कथित संविधानले सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नामकरण ग-यो । देशमा अहिले कायम दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्ता र यसका शासकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय जलपले छेक्न नसक्ने प्रायः भएको छ । देशमाथि भइराखेको राष्ट्रघात, दलालीकरण, आत्मसमर्पण, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित जनताका राजनीतिक अधिकारहरुको कटौती, जनघात, भ्रष्टाचार, कालोबजार, कमिसनको डरलाग्दो खेल, राजस्व छली जनताको दैनिक उपभोय वस्तुमा आतङ्क सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिलगायत यावत् समस्या वर्तमान दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र यसका शासक संसदवादीहरुको उपज हो । नेपाली जनताको ऐतिहासिक एवं निर्मम पहलकदमीबाट कहालीलाग्दो अवस्थालाई नरोक्ने हो भने देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट हुने खताराको सङ्केत देखिँदैछ ।
आज मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ तैपनि शोषण, उत्पीडन र अन्यायमा परेका गरी खाने वर्गको राजनीति गरेको देखिँदैन । आजभन्दा ३० वर्षभन्दा अगाडि नेपालभन्दा धेरै गरिब राष्ट्रहरु थिए । त्यति खेर हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति पनि राम्रै थियो । आज ती राष्ट्रहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर, हाम्रो मुलुक संसारकै कंगाल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ । अहिलेको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले नेपाली कांग्रेसले लिएको उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीति लाई निरन्तरता दिई दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था कै अनुसरण गरिराखेको छ । जसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था झन झन कमजोर रहयो । सम्पन्नहरुको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबको अवस्था झन–झन दयनीय भयो । स्वास्थ्य र शिक्षा गरिबको पहुँच बाहिर रह्यो । सरकारी संस्थाहरु निजीकरण हुँदै गएभने मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा नै निजी क्षेत्रको मुठ्ठीमा पर्न गयो । हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन । उपभोक्ताहरुलाई ढाड सेकाउने काम भयो ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यद्यपि यस्ता परिसूचकहरु नकारात्मक दिशामा गइरहेका छन् । व्यापारघाटा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । देशको व्यापारघाटा चुलिएर वार्षिक बजेट बराबर नै पुगेपछि सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । केही वर्ष अधिसम्म हाम्रो व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले थेगेको थियो भने अहिले आएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह क्रमशः ओरालो लाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम सात खर्ब निर्यातबाट भएको आय ८१ अर्ब र पर्यटनबाट भएको आय करिब ६८ अर्ब जोड्दा पनि आयतलाई बिल र्तिन । पुग्दैन । गत वर्ष मात्रै १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको थियो । अहिलेको सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकारको पुष्टि गर्न चाहन्छ भने दलाल तथा सामान्तवर्गको नियन्त्रणमा रहेको पुँजी आफ्नो हातमा लिएर राष्ट्रीयकरण गरी जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्वामित्व कायम गर्न सक्नुपर्छ । निजी पुँजीवादी उद्योगधन्दा र धनी मानिसको सम्पत्ति भने पुराका पूरा संरक्षण गर्नुपर्दछ ।
मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण आर्थिक सम्बन्धहरुलाई जनताको पहुँचभित्र ल्याउने औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । अहिलेको साम्राज्यबाद एवं विश्व पुँजीवादको निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्तबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ । सार्वजनिक जीवनको जनजीविकामा प्रभुत्व जनाउने वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपतिहरु दलाल पुँजीका ठूला–ठूला उद्योग व्यापारका प्रतिष्ठानहरु ठूला बैंकहरु हवाई तथा यातायातका क्षेत्रलाई जनवादी अर्थव्यवस्थाको राज्य र प्रशासन अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्दछ । हालको कम्युनिस्ट सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बनाउनुपर्दछ । प्राकृतिक सांस्कृतिक र धार्मिक विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको अनुपम पर्यटन क्षेत्रलाई माफियाबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । पर्यटन क्षेत्रलाई नेपाली श्रमजीवी जनताको स्वस्थ्य शरीर, स्वच्छ सामाजिक वातावरण रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । राज्यले हाम्रो मुलुकलाई अहिले पनि कृषि प्रधान देश भनिरहेको छ । तर कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब छ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले कृषिमा साँच्चै क्रान्ति गर्ने हो भने जमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहतमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । राज्यले कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्दै लाने हो भने मात्र मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।
अन्त्यमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरिने अर्थ दृष्टिकोण र कार्यक्रम सापेक्षित रुपमा प्रस्ट गर्नुपर्दछ । समाजवादी सत्ता सञ्चालनका अनुभव, क्रान्ति सञ्चालन गर्दाका अनुभव र शिक्षालाई ग्रहण गर्दा नीतिहरु तय गर्नुपर्दछ । पार्टी नेतृत्वमा बसेका कम्युनिस्ट नेतृत्वहरुको आवश्यकतअनुसारको दाम हुनु पर्दछ । वैभव र विलासी जीवनको अन्त्य गरी सरल जीवन यापनको निर्माण गर्नुपर्छ । तर पार्टीको कार्यकर्ताको हकमा क्षमताअनुसारको काम, दाम र आवश्यकअनुसारको दाम हुनुपर्दछ । हरेक कार्यकर्ता उत्पादन कार्य र श्रममा बन्नै पर्ने नीति लागू गरिनुपर्छ । जनता र आम जनताको हकमा रोजगारीको सुनिश्चिता र समृद्ध जीवनको निर्माण हुनुपर्छ । यसमा कामअनुसारको दाम लागू हुनुपर्छ । नेताहरुको त्याग, आदर्श र सरलताको आवश्यकता पर्दछ भने कार्यकर्ताको मेहनत त्याग र उन्नतिको आवश्यकता पर्दछ भने जनताको श्रम, समृद्धि र स्वतन्त्रताको आवश्यकता पर्दछ । यी सबैको कुल योग नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । यो वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवाद भन्दा कयौँ गुणाले उन्तत र समृद्ध हुनेछ । न यहाँ नेताहरु भ्रष्ट र अनैतिक बन्नुपर्छ र न त कार्यकर्ता बिचलिन हुनुपर्दछ । न जनतानै गरिब पराधीन र अपहेलित हुनुपर्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)